अर्जुन राना, मगरहरुलाई बाहुनहरुले हिन्दू बनाए भन्ने आरोप लगाउनेहरुलाई एउटै प्रश्न गर्न चाहन्छु "ईस्लाम राष्ट्र ईण्डोनेसिया, बुद्धिष्ट राष्ट्र कम्बोडिया, थाईल्याण्ड,भियतनाम र श्रीलंकामा कुन बाहुन गएर हिन्दू बनाए, हिन्दू मन्दिरहरु बनाए?"
सानो हुँदा "भिम थापा" दाईले सुनाउनु हुन्थ्यो "गोरे बहादुर खपाङ्गी खतरा हुनुहुन्छ, वहाँले त खुलामञ्चमा उभिएर विर अस्पतालको हनुमानलाई देखाउँदै, त्यो हनुमानपनी मगर हो भन्नुहुन्छ"। अनि हामी खिसी गर्दै हाँस्थ्यौं।
धेरै पछीसम्म त्यो कुरा सम्झिंदै मनमनै हाँस्थें। अहिले समाज, मानव समाज, इतिहासको थोरै ज्ञान भएपछी गोरे बहादुर खपाङ्गिज्युले के भन्न खोज्नु भएको हो बुझेको छु। आज पहिलो चोटी यो स्टाटस हेर्नेहरुले पढ्दै हुनुहुन्छ कि "रामायण"का पात्रहरु आर्यन थिएनन किनभने रामायणको घटना हुँदा आर्यनहरु सरस्वती सभ्यतामै थिए।
सरस्वती सभ्यतापछी हरप्पन सभ्यता र गंगा सभ्यतामा हजारौं वर्षं लुकेको छ। देवनागरी लिपिको विकास सरस्वती सभ्यताको मध्य तिर भएपछी रामायण लिपिबद्ध गरिएको र पात्रहरुलाई आर्यनिकरण गरिएको मेरो बुझाई छ। रामायण घटना घटेको ताका Madagascar देखी भारत, लंका र अस्ट्रेलिया जोड्ने एउटा बिशाल टापु थियो, कुमारी कन्दम जस्को अवशेष अहिले Mauritius मात्र बाँकी छ महासागरमाथी।
र त्यतिखेर वन नरहरु (बन नर = बनमा बस्ने मान्छे/आदिवासी पछी गएर अपभ्रंस हुँदै वानर/बाँदर भयो) नल र निललाइ राम सेतु बनाउनपनी पानी माथी बग्ने ढुँगाको आवश्यकता पर्यो जस्तो लाग्दैन। Neanderthals Homo Sapiens भन्दा बाठा थिए भन्ने Neanderthalsले अरु भन्दा पहिल्यै छाला घोटेर चिल्लो बनाएर पानी संकलन गर्थे भन्ने ईतिहासबाट पुष्टी हुन्छ।
अब नेपालमा आउनुस। फाट्टफुट्ट तपस्याको लागी आउने बाहेक आर्यनहरुको बस्ती नेपालमा थिएन। महाभारतकालमै नेपालमा किराँत वंश थियो र त्यतिखेरपनी मगरहरु थिए तर सबै किराँती भनेर चिनिन्थिए, नेपालमा बस्ने नेपाली, Indiaमा बस्ने Indian भनेर चिनिए जस्तै।
किराँत वंशको अन्त्य पश्चात धेरै वर्षपछी लिच्छवी वंशमा नरेन्द्र देवको पालामा तामाङ्गको आगमन भएको हो; अनि त्यसभित्रबाट गुरुङ्ग अनि थकाली। नेपाल एकिकरण हुनुभन्दा अगाडिपनी अफ्गानिस्तान देखी बर्मासम्म नेपालनै भनेर चिनिथ्यो भन्ने बुझिराख्नु होला।
र अरि मल्लको पालासम्म काठमाडौंबाट सत्ता सिंजामा नपुगुञ्जेल नेपालभरी मगरहरु राणकको रुपमा काठमाडौंको प्रतीनिधी भएर राज्य सञ्चालन गर्थे। अरि मल्लको पालामा सिंजा राज्यले पश्चिमका राज्यहरु आफ्नो अधिनमा लिएपछी राणकहरुले राने मगर हुँदै राना मगर लेख्न थाले।
बाहुनको र बुद्धको आगमन हुनुभन्दा अगाडिनै मगरहरु प्रकृती पुजक थिए। संसारभरी मानव समाज प्राकृतिक प्रकोपको त्रासको कारण प्रकृती पुजक हुन थालेका हुन। त्यसपछी तन्त्र साधना हुँदै धर्मको बिकास भएको हो। आर्यनको आगमन नहुँदै सनातन परम्परा, शैव र शाक्तमा प्रकृती पुजकहरु परिणत भैसकेको थियो।
अहिले किराँती भनेर मगरहरु चिनिँदैनन, राई-लिम्बु मात्र चिनिन्छन्, त्यस्तै शब्दजालमा पुर्विय दर्शन-सनातन, हिन्दू भनेर चिनिन्छन । अनि कसरी मगरलाई हिन्दू बाहुनले बनायो? सबै बाहुनलाई यसरी भन्न खोजिएको होइन । बाहुनबादी सोंचमा भएकाहरुलाई प्रहार गर्न भने खोजिएकै हो । सनातन न कसैको हो न कसैको हुन सक्छ ।
यो त सनातनबादीहरुको हो । जातको कुरा मैले हेरै भन्न चाहिन । सनातनसँग जात जोड्न हुदैँन । जागरण अभियान भने गर्न सकिन्छ ।
यही कुरा बुझाउन आदिवासि-जनजाती जागरणको आवश्यकता देख्छु म। पश्चिमाको युरो-डलर खाएर बाहुन काट्ने अभियानद्वारा हैन कि आफ्नै मिठो-मसिनो खाएर यो राष्ट्र निर्माणमा आदिवासि-जनजातिको ठुलो देन छ र अबको समृद्धिमापनी आदिवासि-जनजातिलाई समान अवसर दिएर मात्र अगाडी बढ्न सकिन्छ र राष्ट्रीय अखण्डता अक्षुण राख्न मतवालिहरुमापनी सनातन परम्परामा अपनत्व हुनुपर्छ।
सनातन परम्परा हामिमा कसैले लादेको हैन यो आदिकाल देखी हामिले मानिआएका छौं र यो इतिहास जोगाउनु र भावी पुस्तालाईपनी सिकाउनु हाम्रो कर्तव्य हो।
संपूर्ण नेपालीको सान, मेरो नेपाल महान
'नेपालको परिप्रेक्षमा बृद्धाश्रम खोल्नु भनेको अभिसाप'
यस्तो छ भाई टिकाको कथा (पूजाविधि सहित)
“मृत्योर्मा अमृतम् गमय”
संशोधनको नाममा मधेशी दललाई ‘ललिपप’
राजनीतिमा साधु र चोर
जातीय उन्मादले प्रदेशको विकास हुँदैन
प्रथम स्थान अध्यात्मलाई !